Soodhadhka Kulanka Wireless: Amazon oo soo bandhigtay tartamayaasha Airpods - TELES RELAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM »Isticmaalka Kuleylka Kuleylka ah: Amazon oo soo Bandhigay Meelaha Cirka ah
Kabaha sirta ah: Amazon oo bilawday tartamada hawada
Amazon ugu dhakhsaha badan lagu daahfuri doonaa headphones ay wireless in daraan Alexa, hab wanaagsan oo dhig AirPods tartan toos ah Apple ama Samsung Galaxy ku hari.
Amazon ma laha hamiga, oo hadda wax ka qabta suuqa santuuqa telefoonka ee wireless. Shirkadda Jeff Bezos ayaa soo bandhigi doonta suuqyadooda madaxa ah oo ku xiran Alexa. Waxay ujeedadoodu tahay inay si toos ah ula tartamaan Apple AirPods, oo leh qiimo hoose iyo tayada dhawaaqa wanaagsan.
Amazon waxay soo saari doontaa santuuqyadeeda sirta ah ee qeybta dambe ee 2019
Amazon ayaa si dhakhso ah u bilaabi doonta talefoonada taleefannada gacanta ee u gaar ah oo lagu qalabayn doono Alexa. Shirkaddu waxay rajeyneysaa in ay la tartanto Apple AirPods, gaar ahaan tan iyo naqshadeynta u dhaxeysa labada labbis dhagaxyo isku mid ah. Laakiin si ay u kala takooraan, injineerada Amazon waxay diiradda saaraan tayada codka.
Dhab ahaantii, kuwa ka mid ah telefoonnada gacanta ee cusub ee Amazon ayaa ka sareeya midka AirPods. Xaalad waliba, tan waxaa lagu muujiyey iyada oo ah gudaha gudaha goobta Bloomberg. Faa'iidada kale ee cajaladaha dhagaha ee Amazon waa in ay yeelan doonaan kaaliyaha codka ee Alexa, waxaa loo hawlgeliyaa marka ay sheegto "Alexa".
Iyada oo la isticmaalayo kuliyadaha kulaylka, dadka isticmaala waxay awood u yeelan doonaan " sameyso iibsi, muusikada, cimilada iyo macluumaadka kale ee muhiimka ah Amarrada codka.
Soodhadhka kombiyuutarka ee kombuyuutarka ee kombuyuutarka loo adeegsado ee ujeedkiisu yahay in lagu wajaho AirPods
Iyada oo tayada codka iyo isdhexgalka ee Alexa, Amazon rajeynayaa in ay ka dhigi iyada laydhka dhagax guul. Intaa waxa dheer, shirkaddu waxay leedahay, sida AirPods, waxay u oggolaatay in ay dhagaxyada dhegaha si ay u bixiyaan xakamaynta gawaarida. Sidaa daraadeed, adigoo xayeysiiya, waxaan ku dhex socon karnaa muusikada kala duwan ee heesaha cayaaraha, ama soo wicitaanada.
Ogsoonow in telefoonada Amazon lagu iibiyo kiis gaar ah, taas oo sidoo kale u oggolaaneysa inay iyaga ku dhejiyaan. Sida qiimaha talefoonada buuggan cusub ee sirta ah, waa caddayn, bogga Bloomberg ma bixin faahfaahin ku saabsan mowduucaan.
Waxaan ognahay in ay tahay in lagu iibiyo qiimo ka soo jiidasho badan AirPods. Xasuusin, 2 AirPods waxaa lagu iibiyaa 179 euros ama 229 euros oo leh sanduuqa ku xaddidan wireless. Haddii Amazon uu ixtiraamo jadwalkeeda, waa in telefoonada cusub ee taleefanku soo baxaan qeybta labaad ee sanadka. Tani waxay noqon doontaa fursad ay ku tijaabiso, gaar ahaan heerka codka.
Heshiiska wanaagsan: Logitech fareebka fareebka G305 illaa 25 halkii ay 60 €
Heshiiska wanaagsan: Logitech G203 wuxuu ku xiran yahay jiidka ciyaaraha ee 19 kaliya
PS5: Sony waxaa laga yaabaa inay la wadaagto Amazon ciyaaraha daruuriga ah
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.begeek.fr/ecouteurs-sans-fil-amazon-lance-ses-concurrents-des-airpods-311962
Iska ilaali aaminta Amazon been abuur been abuur ah
Tesla Model S iyo X: dhawaan makiinadaha cusub si kor loogu qaado madaxbannaan - PhonAndroid.com
Doorashada madaxweynenimada ee Ukraine: jilitaanka Zelensky kama dhigo Ruushka qosolka